Photoshop CC wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato oo aad ku xulato walxaha hal guji | Abuurista khadka tooska ah
Waa wax lala yaabo habka Photoshop uu u xuubsiibtay si sanad walba aan u aragno waxoogaa horumar ah oo muuqda, oo noo oggolaanaya inaan keydinno howlihii hore noo qaadan lahaa dhowr daqiiqo ama xitaa saacado. Waa waxa tikniyoolajiyadda maanta haysata. Sidaa darteed, waa wax xiiso leh inaan ka feejignaano cusbooneysiinta cusub ee barnaamijyada sida Adobe.
Markan waxay la timid hawl cusub oo loogu talagalay aaladda Photoshop oo caqli badan taas oo ah awood u leh inuu ku ogaado walxaha hal guji. Waa Adobe oo daabacday fiidiyow muujinaya sida aaladda xulashada cusubi u shaqeyso iyo inay dhowaan u imaaneyso Photoshop CC. Waxaa loo yaqaan "Dooro Mawduuca", ama dooro maado, oo waxay isticmaashaa Adobe Sensei sirdoonka farsamada iyo barashada mashiinka si aad loola yaaban yahay.
Sidaan ku sheegnay bilowga boostada, waxay u imaaneysaa waqti badan nooga badbaadi hawlaha goynta ama xulashada walxaha in aan ku yeelan karno goob. Tifaftirka sawirku wuxuu noqon doonaa wax dhakhso leh oo lagu sameeyo sheeko cusub oo adeegsaneysa barashada mashiinka iyo caqliga macmalka ah; laba isbeddel oo hadda jira noocyo badan oo barnaamijyo iyo adeegyo ah.
Daqiiqadahaas markaan adeegsanno lasso-ka Photoshop, waan awoodnaa isticmaal Xulo Mawduuca si hal guji si buuxda u xusho mawduuca sawirka ku jira. Way fiicantahay inaad fiiriso, maxaa yeelay fiidiyowga waxaan kudhowaanay inaan la dhacsan nahay horumarka arintan ku saabsan Adobe sameeyay.
Waxaad awoodi kartaa la shaqee labada shay iyo qaar kooxiba, iyo waxay u adeegtaa si dhammaystiran si loo xusho sheyga ugu dhow si looga tago asalka naxariistayada si loo fuliyo dhammaan noocyada wax ka beddelka; wax aan baray waqti aan fogayn casharkaan.
Barnaamij u xuubsiibanaaya sidan oo kale waxay sameyn doontaa fikradda ah inaad yeelato qiimo badan mustaqbalka si loo abuuro, marka loo eego geedi socodka hawsha fulintiisa. Sixirka waxaa sameyn doona Photoshop.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Qalabka casriga ah ee Photoshop CC wuxuu ku ogaadaa walxaha hal guji